Google I / O 18 wuxuu bilaabanayaa bisha soo socota ee May 2016 | Wararka IPhone
18-ka Maajo, Google I / O 2016-ka ayaa bilaabmaya
Google iyada oo loo marayo maareeyaha cusub ee Sundar Pichai ayaa kaliya leh ku dhawaaq maalmaha Google I / O horumariyaha ee la qaban doono sanadkan. Gaar ahaan inta udhaxeysa 18-ka iyo 20-ka Maajo, taariikho la mid ah kuwii sanadaha kale. Si ka duwan sanadihii ugu dambeeyay, oo shirarkan lagu qabtay San Francisco, markan waxaa lagu qaban doonaa Mountain View oo aad ugu dhow xerada Google, taas oo aad ugu fududaan doonta shaqaalaha Google inay si isku mid ah uga soo muuqdaan.
Goobta lagu xushay munaasabaddan waa Tiyaatarka Shoreline, oo qaadi kara kaqeybgalayaasha 22.500. Shirarkii hore ee lagu qabtay Moscone waxay kaliya awood u lahaayeen 6.075 qof, sidaa darteed laga yaabee Google inay hayso wax aad u weyn oo loo diyaariyey taariikhahaas. Sannadkan wuxuu xusi doonaa sannad-guuradii XNUMX-aad ee shirarka horumarinta ee Google ay qabato sannad kasta.
Intii uu socday shirkani warka nooca xiga ee Android ayaa la soo bandhigi doonaa, oo sanadkii hore loo bixiyay Android M markii dambena loo bixiyay, sidaad wada og tihiin, Android 6 ama Marshmallow. Muddo seddex maalmood ah, horumariyayaashu waxay awoodi doonaan inay qoto dheer la yeeshaan khubarada Google dhammaan wararka iyo shakiga ay qabaan markay tahay horumarinta barnaamijkooda moobiilka ee Android.
Laakiin kaliya maahan in laga wada hadlo Android shirarka, laakiin Android Wear, xaqiiqda dalwaddii, internetka waxyaabaha sidoo kale waa laga wada hadli doonaa, alaabtu waa ta ay ragga ku saleysan Mountain View ku shaqeeyaan maalin kasta. Sida sanadaha kale, muxaadarooyinka waxaa lagala socon karaa internetka. Si aad marwalba ula socodsiiso wararka ugu dambeeya ee la xiriira shirarka soo saareyaasha Google, kaliya booqo websaydhka horumariyaha Google ama isha ku hay wax walba oo lagu daabaco barta @ io16 hashtag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » 18-ka Maajo, Google I / O 2016-ka ayaa bilaabmaya
Meme Studio, waa barnaamij lagu sameeyo memes ilbiriqsiyo gudahood
Muraayadaha loo yaqaan 'Zeiss lenses' ayaa ugu dambeyn yeelan doona nooc iPhone ah!